China tavoahangy kosmetika akrilika; Orinasa mpamokatra tavoahangy fanosotra | Qianduo fonosana
Fanamarihana manokana: ny paompy fanerena dia tavoahangy poakaty ary mila fenoina ilay tavoahangy banga (mahazatra ny nanohina ny fantsona fohy an'ny lohan'ny paompy)
Ny fonosana kosmetika amin'ny fizotry ny famokarana dia mila manara-maso ny kalitao, mba hitazonana ny sanda voafaritra ao anaty faritra mety. Aorian'ny fividianana vokatra dia tokony hizaha ny fonosana ny mpanjifa mba hahitana raha mahafeno ny fepetra takian'ny teknolojia famokarana ilay fonosana vokatra na simba izany mandritra ny fitaterana. Ireo mpanjifa dia tsy afaka manao raha tsy mijery ireo entana fonosana, izay misy ifandraisany amin'ny tombotsoany manokana. Raha be loatra ny habetsaky ny fampahalalana ilaina hojerena dia afaka misafidy ny fomba fitsirihana santionany izy ireo. Na izany aza, na inona na inona fomba ampiasaina dia ilaina ireto fomba manaraka ireto: 1. 2. Mampiasà fitaovana azo itokisana sy fomba fanaraha-maso. 3. Raketo ny angona. Ny valin'ny fitsapana 4 dia mitombina. Ny endrik'ilay tavoahangy fitaratra dia voafetra amin'ny karazany sy ny habetsaky ny vokatra. Aorian'ny famaritana ny bikan'ny tavoahangy fitaratra dia mila manaisotra ny maodely santionany isika, amin'ny ankapobeny misafidy ny fijery anoloana, ny fijerin'ny lafiny, ny fijery ambony, sns. Ny toerana misy ny vavan'ny tavoahangy dia mila sary nitarina teo an-toerana ihany koa. Ny refin'ny tavoahangy fitaratra dia mila marihina amin'ny sary, manome ny fandeferana, ny habetsahana na ny fahaiza-manao. Ny refy sy ny fandeferana dia mila ampifanarahana amin'ny fifampidinihana amin'ny mpanamboatra satria voafetra ny masinin'ilay mpanamboatra. Amin'ny ankapobeny, ny haavon'ny milina iraisana amin'ny tavoahangy dia eo anelanelan'ny 25-300 mm. Ny savaivon'ilay tavoahangy dia mifandraika amin'ny habetsaky ny masinina novokarina, ary ny savaivony dia anelanelan'ny 12-150 mm. Satria amin'ny dingan'ny famokarana sy ny famolavolana azy dia hisy fiantraikany eo amin'ny lafin-javatra ivelany izany, noho izany dia ho hafa ny endrika sy ny habe, noho izany ilaina ny manome ny haben'ny fiovana azo ekena na fandeferana. Ny fandeferana mahazatra dia mety amin'ny fahaiza-manao (ML), faobe (kg), savaivony (mm) ary haavony.
Tombony azo avy amin'ny tavoahangy plastika
1. Ny ankamaroan'ny tavoahangy plastika dia manana fahaizana miady amin'ny harafesina matanjaka, tsy mihetsika amin'ny asidra sy alkaly, afaka mitazona asidra sy asidra alkali samihafa, miantoka ny fahombiazan'ny tsara;
2. Ny vidin'ny famokarana tavoahangy plastika dia ambany ary ny vidin'ny fampiasana dia tsy avo, izay afaka mampihena ny vidin'ny famokarana normal an'ny orinasa;
3. Ny tavoahangy plastika dia mateza, tsy tantera-drano ary azo entina;
4. Mora miendrika endrika samihafa izy ireo;
5. tavoahangy plastika dia insulator tsara, izay misy fahombiazan'ny insulated manan-danja amin'ny famokarana herinaratra;
6. Ny plastika dia azo ampiasaina hanomanana solika solika sy lasantsy solika hampihenana ny fanjifana solika solika;
7. Ny tavoahangy plastika dia mora entina, tsy matahotra hianjera, mora mamokatra, mora simbaina;
Teo aloha: Paompy plastika vita amin'ny volo, lohan'ny paompy plastika, 28/410 24/410 20/410 lohan'ny paompy plastika, paompy volo
Manaraka: Capsule tavoahangy PET mainty